Momba anay - D&L Industry And Trade (Xuzhou) Co. Ltd.
D&L Industry And Trade (Xuzhou) Co. Ltd. dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana solomaso sy famokarana solomaso, Misy andian-dahatsoratra maro, toy ny solomaso fampiroboroboana, solomaso lamaody, solomaso fanatanjahan-tena, solomaso fety, solomaso solomaso, solomaso any amin'ny tempolin'ny volotsangana ary solomaso hazo volotsangana. Izahay efa vonona ny solomaso solomaso ary afaka manao fanjonoana isaky ny andian-dahatsoratra, afaka manolotra ny serivisy maneso ny safidy loko sy ny fanaingoana logo.
Fanaraha-maso kalitao tonga lafatra
Manana ekipa fitantanana kalitao matihanina sy fanaraha-maso izahay.
Fahafahana manohana famatsiana
Orinasa matihanina 7 500.000 tsiroaroa / isaky ny orinasa / isam-bolana 3 ~ 15 andro ora fanaterana
Serivisy avo lenta haingana
Latsaky ny adiny 2 isaky ny fanadihadiana 24 ora isan'andro 365 andro isan-taona
Valiny haingana; Teny nalaina Professional; Fanaterana haingana; Kalitao avo; Fiantohana ara-barotra.
Betsaka ny kaontinay manokana no miorina ao anatin'ny 1 andro ary manafatra avy hatrany aminay. Ny fanontaniantsika rehetra dia voavaly ao anatin'ny 1-4 ora, ny haingana indrindra dia ao anatin'ny 5 minitra, fotoana fitarihana ho an'ny kaomandy vonona amin'ny 1 herinandro, ho an'ny kaomandy logo manokana ao anatin'ny 12-15 andro. Amin'ny maha tombony antsika dia afaka manome fotoana fandefasana marina izahay, solomaso mainty tsara ary serivisy ara-potoana aorian'ny fivarotana. Fandokafan-tsaina izahay mahita ny zavatra nampiaiky volana anay ary nahazo tsikera tsara maro avy amin'ny mpampiasa. Mpanjifa maro no nandidy anay tsy tapaka isam-bolana, ary isan-taona.
Tongasoa eto aminay hifandray aminay raha misy fanontanina amin'ny solomaso solomaso, izahay dia hiezaka ny tsara indrindra mba hanolotra anao ny vokatra tsara indrindra sy ny serivisy hahazoana fahombiazana eo amin'ny samy izy!